ဧပွီ ၂၆, ၂၀၂၂ - ၅:၅၅ ညနေ
အင်အားကြီးတဲ့လက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်၊ မြို့တွေရွာတွေကိုမီးရှို့၊ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ပြီး နိုင်ပြီထင်သလား၊ နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လို့ရပြီထင်သလား။ စစ်ရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေးအရ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာရှုံးနိမ့်နေပါပြီ။ အဖက်ဖက်မှာဘယ်လိုမှ ကောင်းမွန်စွာအုပ်ချုပ်လို့မရတော့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာ နိုင်ထက်စီးနင်းလေသံနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ခေါ်ပါတယ်။တိုင်းရင်သားတွေဟာ အယုံအကြည်မရှိလို့ သူတို့ထပ်ပြီးရှုံးပြန်ပါတယ်။ အဖြေထွက်မှာမဟုတ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကို တိုင်းရင်းသာအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်မှ အကောင်းမြင်ခြင်းမရှိပါ။ မတရားအာဏာသိမ်းပိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာ အဖက်ဖက်မှာထိန်းသိမ်းအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိလို့ တကယ်ကိုရှုံးနိမ့်နေပါပြီ။
ဆုပ်လည်းဆူး စားလည်းရူး (ဆောင်းပါး)
ဇနျနဝါရီ ၂၅, ၂၀၂၂ - ၁၁:၅၅ ညနေ
ဆုပ်လည်းဆူး စားလည်းရူး (ဆောင်းပါး) အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ နှင့် အာဏာရှင် သင်ကြိုက် တာရွေး
စကျတငျဘာ ၃, ၂၀၂၁ - ၁၁:၄၃ ညနေ
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုသည့်အသံကို စကြားခဲ့ဖူးသည်မှာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲနားနီး ကာလကဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး လာမည့်အစိုးရသစ်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖြစ်ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရ ဦးဇော်ဌေးက သမ္မတရုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီချုပ်အစိုးရက သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရကနေ တစ်ဆင့် သတင်းစကားပါးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဇှနျ ၂၄, ၂၀၂၁ - ၁:၀၁ ညနေ
မြန်မာ ကို ကျရှုံး နိုင်ငံ ဖြစ်အောင် လုပ်နေတာ ဘယ်သူလဲ ?
ဇှနျ ၅, ၂၀၂၁ - ၅:၅၇ ညနေ
လတ်တလော မြန်မာပြည်သူလူထုဟာ လုံခြုံမှုမရှိတဲ့အခြေအနေကို ခံစားရင်း ကျီးလန့်စာစား စိုးရိမ်သောကရောက်နေကြရတယ်။ အဓိကပြဿနာကတော့ နိုင်ငံအနှံ့မှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ လုယက်မှုတွေ၊ အေးဓားပြတိုက်မှုတွေ၊ တရားလက်လွတ် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုတွေ၊ ဗုံးခွဲမှုတွေ၊ အဆိုးဆုံးကတော့ ပြည်သူကို ကာကွယ်ပါ့မယ်လို့ သစ္စာဆိုထားတဲ့ စစ်ကောင်စီ တပ်သားတွေရဲ့ အဓမ္မလုယက်သတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်နေကြတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တရားရေးမဏ္ဍိုင်နဲ့တကွ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု လုံးဝပျက်စီး ကျဆုံးသွားခြင်း ဖြစ်တယ်။
အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် ဆွာဒစ် ရှီးရာဇီး ဘယ်သူလဲ ?
အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် ဆွာဒစ် ရှီးရာဇီး နှင့်ပတ်သက်ပြီး အနည်းငယ်ဖြစ်စေ သိစေရန် ဤ ဆောင်းပါးအား အဗ်နာ ပရိတ်သတ်များ အတွက် fb ပေါ်မှ copy လုပ် တင်ပြလိုက်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော် ဖေသ်လုပ်အာလင်မ်များအကြောင်းကိုfbပေါ်တွင်မက၊တရားဟောကြားရာတွင်လည်း ဖော်ပြ သင့်ပေသည်။
မတျ ၄, ၂၀၁၇ - ၁၁:၄၄ ညနေ
လူငယ်လူရွယ်များနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်မှုများ ဆိုသည့် ဤခေါင်းစဉ် ကို အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ် ရှီရာဇီး ၏ရေးသားသီးကုံးထားသည့် ( မိုရ်ှကေလာသ် ဂျင်စီ ဂျဝါနန် )ဆိုသည့် စာအုပ်မှ ကောက်နုတ် ဖော်ပြထားပါတယ်။
မတျ ၃, ၂၀၁၇ - ၁၁:၃၅ ညနေ
မွတ်စလင်မ်များ မေ့နေသည့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်သ် (အ.စ) (၂)
မွတ်စလင်မ်များ မေ့နေသည့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်သ် (အ.စ) (၂) ဆိုသည့်ဆောင်းပါးလေး ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖတ်မှတ်လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
မွတ်စလင်မ်များ မေ့နေသည့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်သ် (အ.စ) (၁)
မတျ ၁, ၂၀၁၇ - ၁၁:၅၁ ညနေ
မွတ်စလင်မ်များ မေ့နေသည့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်သ် (အ.စ) (၁) ဆိုသည့်ဆောင်းပါးလေး ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖတ်မှတ်လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
ကျောင်းသားကောင်း တစ်ယောက် ဟုတ်မဟုတ် စစ်နည်း
ဇနျနဝါရီ ၄, ၂၀၁၇ - ၁၁:၀၅ ညနေ
ကျောင်းသားကောင်း တစ်ယောက် ဟုတ်မဟုတ် စစ်နည်း ကို အောက်ပါအတိုင်း အဗ်နာ ချစ်ပရိတ် သတ်ကြီး အတွက် ဖော်ပြ အပ်ပါတယ်။ မိမိတို့ အိမ်ရှိ ကျောင်းသားများ ကို စိစစ် နိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
အဲအ်သေကာဖ် နှင့် ပတ် သက်ပြီး သိထားရမည့် အကြောင်းအရာ များ
ဒီဇငျဘာ ၁၀, ၂၀၁၆ - ၁၁:၄၈ ညနေ
အဲအ်သေကာဖ် နှင့် ပတ် သက်ပြီး သိထားရမည့် အကြောင်းအရာ များ ကို လေးစား ရသည့် အဗ်နာ ချစ် ပရိတ်သတ်လေ့လာနိုင်ရန် တင်ပြအပ်ပါတယ်။
ဘာသာရေး နှင့် ပတ်သက်သည့် မှတ်စုတိုလေးများ (၁)
ဒီဇငျဘာ ၈, ၂၀၁၆ - ၁၁:၃၇ ညနေ
ဘာသာရေး နှင့် ပတ်သက်သည့် မှတ်စုတိုလေးများ (၁) ကို ချစ်ခင်လေးစား ရသည့် အဗ်နာ ပရိတ်သတ်များ အတွက် တင်ပြအပ်ပါတယ်။
နိုဝငျဘာ ၁၉, ၂၀၁၆ - ၁၁:၃၃ ညနေ
အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ကိုယ်တိုင် မိမိ၏ ကျမ်းတော် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် စူရဟ်အမှတ် ၅ အာယာသ်တော်အမှတ် ၂၇ တွင် အောက်ပါအတိုင်း မိန့်တော်မူထားပါသည်။ انّما یتقبّل الله من المتقین အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်သည် မွတ်သကီ(သက္က်ဝါတရားရှိသူ) ၏ (အလုပ်များ)ကိုသာလျှင် လက်ခံတော်မူ လေ၏။
နိုဝငျဘာ ၅, ၂၀၁၆ - ၁၀:၅၈ ညနေ
ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူ အစစ် ဘယ်လိုလူ ဖြစ်ကြောင်း ကို လေ့လာ မှတ် သား နိုင်ရန် တင်ပါအပ်ပါတယ်။